Carbiska Barbaarta Aqoonyahanka Somaliland (Shaqo-Qaran), GuulahaBarnaamijka Shaqo-Qaran.
Friday April 30, 2021 - 17:45:16 in Articles by Hadhwanaag News
an iyo markii la aasaasay Barnaamijka Shaqo-Qaran waxa uu is-bedel wayni ku yimid yididiiladii iyo noloshii dhallinyarada hanka leh. Waxaa soo noolaaday kalsoonidii shakhsiyeed ee aqoonyahanka, markii ay yaqiinsadeen in ay kartidooda iyo aqoontooda ku meel mari karaan, dalkoodana ugu adeegi karaan iyaga oo horseed u noqon kara badhaadhidda ciida ay ku noolyihiin iyo barwaaqawga nolosha dadkooda, iyaga oo adeegsanaya aqoontooda iyo jaaniska laga siiyey hannaanka dawladnimo.
Barnaamijka Carbiska Barbaarta aqoonyahanka(Shaqo-Qaran), waxaa markii ugu horraysay hal-abuuray oo daahfuray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Barnaamijka Shaqo-Qaran waxa uu tixgelin muuqata siiyaa hablaha aqoonyahanka ah iyo inamada da'doodu ka yartahag 30 jirka. Kootada hablaha loo qoondeeyey saami ah 30%. Halka inamadana loo qoondeeyey saami ah 70%.
1. Waxaa dufcaddii koowaad ee Shaqo-Qaran ka faaiidaystay wiilal iyo gabdho tiradoodu dhantahay 1349 dhallinyaro ah oo 1203 kamid ahi shaqaale joogto ah ka yihiin Maanta Wasaaradaha iyo hay'adaha madaniga ah ee dawladda. Halka 146 kamid ahi ku biireen ciidamada Qalabka-sida ee Qaranka. Kaas oo ay garbahooda saaranyihiin darajada laba xiddigle, kolkii ay soo dhammaysteen tobabarkii Ciidanka Qalabka-sida, dhammaantoodna laga dhigay taliyaal maamulaaya laamaha kale duwan ee Ciidanka, aqoontooda iyo kartidooda dhallinyaronimana uga faa'iidaynaya qarankooda iyo dadkooda ay u adeegayaan.